Alahady 30 Mey 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
“MAMPIORINA NY MINO NY HERIN’NY FANAHY MASINA”
Alahadin’ny Fikambanan’ny Diakona sy Loholona (FDL)
Alahady Fetin’ny reny
Ny horonan-tsary notontosaina ho fiaraha-miombona an-tokantrano izao taterina eto izao, izay nozaraina tao amin’ny vondrona Facebook “Mpiangona @ Amparibe Famonjena” , satria tsy mbola misy fotoam-bavaka azon’ny Fiangonana atrehina mivantana ao an-tranon’Andriamanitra.
Ny mpiomana ho Mpitandrina, RATSIMBA ANDRIAMILANDY Liantsoa, ao amin’ny Faculté de Théologie no nitarika ny fotoana, raha ny Mpitandrina miana-raharaha RAMILISON Diamondra no nitory ny Teny. Ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena no nitarika hira. Ny litorjia endriny voalohany no narahina.
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana ary ny fiarahabana apostolika dia ny SAL. 113 no niarahana namaky teo am-pitsanganana, izay manao hoe: « Haleloia. Miderà, ianareo mpanompon’i Jehovah, miderà ny anaran’i Jehovah. Isaorana anie ny anaran’i Jehovah hatramin’izao ka ho mandrakizay. Hatramin’ny fiposahan’ny masoandro ka hatramin’ny filentehany no hoderaina anie ny anaran’i Jehovah. Avo ambonin’ny jentilisa Jehovah ; ambonin’ny lanitra ny voninahiny. Iza no tahaka an’i Jehovah Andriamanitsika, Izay mipetraka any amin’ny avo, nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny ety an-tany ? Manangana ny malahelo hiala amin’ny vovoka Izy ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin’ny zezika, mba hametraka azy ho naman’ny mpanapaka ny olony. Mampitoetra tsara ny momba Izy, fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Haleloia ». Ny hira FFPM 197: 1; 3;4 “ HALELOIA DERAINA ANDRIAMANITRAY ” no nanaraka izany ary vavaka fisaorana. Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra araka ny I KOR. 6 : 19 ; I TAN. 22 : 19a ; JOS. 23 : 11 manao hoe : « Ahoana àry ? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin’ny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin’ Andriamanitra ? ka tsy tompon’ny tenanareo ianareo. Fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazà an’Andriamanitra amin’ny tenanareo… Koa ankehitriny ampitadiavo an’i Jehovah Andriamanitrareo ny fonareo sy ny fanahinareo… Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tia an’i Jehovah Andriamanitrareo » Amena. Natao ny hira FFPM 242: 3; 4 “MISAOTRA ANAO IZAHAY, RY RAY” dia nisy vavaka fifonana. Nohiraina ny FFPM 437: 3 “RY JESOA KRISTY TOMPO”. Nisy ny Teny famelan-keloka nomena ny Fiangonana teo am-pitsanganana manao hoe : « Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin’ny zanaka naloaky ny kibony ? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao … Satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan’Andriamanitra… dia Izaho efa nihaino… Indray mipi-maso monja no nahafoizako anao. Fa amin’ny indrafo lehibe kosa no ampodiako anao. Tamin’ny firehetan’ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mipi-maso monja. Fa amin’ny famindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah Mpanavotra anao » (ISA. 49 : 15 ; II MPA. 22 : 19a; e ; ISA. 54 : 7-8). Nohiraina ny FFPM 547 : 3 “ RY JESOA MASOANDRONAY Ô! Notononina ny fanekem-pinoana apostolika (laharana I). Nisy vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy taorian’izany.
Rehefa izay dia notatazana ny rakitra. Nampahatsiahivina ny fanentanana mba hanao izany ny isan-tokantrano ka hanatitra izany rehefa misokatra ny trano fiangonana. Ny hira FFPM 181: 1-2 “FANAHY MPANAZAVA”no notanterahina nandritra izany. Nisy vavaka fanavaozana fanoloran-tena natao teo am-pitsanganana.
Nohiraina ny FFPM 181 : 3 “ FANAHY MPANAZAVA”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Loholona RABAKO Ralambonirina Jean-Jacques sy namaky ny EKS. 31: 1-5, raha ny Diakona RANDRIAMASIMANANA Hanta no nanohy ny vakiteny araka ny ao amin’ny LIO. 10: 17-24; I JAO. 3 : 18-20. Natao teo am-pitsanganana ny hira FF 46: 1 “MBA TANTANONAO, RY RAIKO”. Toriteny no nanaraka izany.
Mifandray avokoa ny perikopa voalahatra anio: ny fahombiazana avy amin’ny Fanahy Masina ao anatin’ny olona manatanteraka asa.
Ny Eksodosy dia milaza ny Fanahy hahazoana talenta sy fahaiza-manao araka ny fandaminan’Andriamanitra, ary ny iraka nampanaovin’ny Tompo an’i Mosesy. Eto dia ao anaty fandrafetana ny tabernakely (fanaka). Ny tokony hatao mba hikaliana ilay endrika tadiavina: ny Fanahin’Andriamanitra izay nomena irery ihany no afaka hamantatra sy hanatanteraka ny asa. I Bezalila no nomena fahendrena sy fahiratan-tsaina ary fahalalana.
Ny ao amin’ny Lioka kosa dia manambara fa hananana fahefana ny Fanahy. Rehefa niverina nitory ny Filazantsara nanirahan’ny Tompo azy ny mpianany, dia nilaza tamin’i Jesoa ny fahatsapany hoe nisy fandrosoana ny asa nataony toy ny fandroahana demonia. Ny fahaizana maka lesona tamin’ny iraka nampanaovina azy ireo, no nahatonga ny fahombiazana. Fa ambonin’izany ny Fanahin’i Jesoa, izay avy amin’Andriamanitra ihany, izay fahefana faran-tampony ka resy ny fahavalo.
Ao amin’ny I Jaona 3: 18-20 indray no ahitana ny Fanahy ho amin’ny fitiavana ny asa. Mamaritra zava-dehibe roa momba ny Fitiavana, ny fanambarana fanentanana mba tsy ho tia amin’ny teny na lela fa amin’ny asa sy ny marina. Rehefa mahatsapa ny olona iray, fa tonga sy misongadina ao anatiny ny Fanahin’ny fitiavana, dia afaka hiasa am-pitiavana sy fahamarinana izy ary handresy lahatra fa tena kristiana izy amin’ny fiainany manontolo.
Ireo fanazavana ireo dia mamehy ny olona manontolo. Hita ao ny momba ny fanahy (Fanahin’ny fahefana nomena ny mpianatra), ny saina sy ny fo (fandehanana amin’ny fitiavana), ny vatana (fananana talenta vaovao hoentina miasa). Hampiorina tsara antsika amin’ny finoana izany hahafahana mihavao hatrany hatrany noho ny asan’ny Fanahy Masina. Ny maha olona antsika manontolo no aoka ho voakasiky ny Tenin’Andriamanitra.
Mba hanaovan’ny Fiangonana dingana àry dia ireto no hafatra omena:
Velomy ny talenta ao anatinao amin’ny alalan’ny Fanahy Masina
Rehefa miantso olona ny Tompo hanao ny asany, dia omeny miaraka amin’izany koa izay rehetra ilaina, hahafahana manao ny asa fanompoana. Mety hanana faniriana tsara isika fa ny fahaiza-manao no mety tsy misy na tsy ampy. Azo atao ny mifehy zavatra maro avy amin’ny asan’ny Fanahy Masina satria io Fanahy io ihany no hany manome fahendrena sy fahiratan-tsaina. Ny vokatra ho antsika izay mandray ny Fanahy dia tsara fitomboana sy fiovan’ny fari-piainana. Noho izao andro natokana ho an’ny reny izao dia entanina izy ireo amin’ny fahaiza-manao ao an-tokantrano toy ny fikarakarana sakafo, fanjairana… Atony ny Tompo, angataho Aminy izany Fanahy izany. Ho an’ny raim-pianakaviana sy zanaka izay manomana fanomezana ho an’ny reny, omeo lanja ny fanaovana asa tanana. Banjino i Jesoa Kristy izay afaka manampy antsika, miantehera Aminy sy ny Fanahy Masina omeny, hahatonga antsika ho matihanina sy hamokatra ho an’Andriamanitra.
Ampiasao ny fahefana omen’ny Fanahy Masina hampiorina anao
Ny fanaovana ny asa amin’ny finoana no handraisana ny Fanahin’ Andriamanitra, ka hanehoany asa lehibe eo amin’ny olona. Ny famantarana sy ny fahagagana rehetra eo amin’ny fitoriana ny Filazantsara, dia tsy avy amin’ny asan’olombelona, fa avy amin’ny asan’ny Fanahy Masina; isika no fitaovana. Mitondra fanafahana ho an’ny olona izany ny Fanahy Masina, amin’ny asan’ny ratsy rehetra izay mamatotra ka tokony hibebahana. Raiso sy ampiasao ny herin’ny Fanahy Masina mba hahazoana fifaliana sy fahasambarana. Tsy io fahombiazana io no tadiavin’ny Tompo mialoha, fa ny fibebahantsika hahatongavantsika ho mponin’ny lanitra. Ny fifaliana laharam-pahamehana tian’i Jesoa hitoetra, dia isika manao ny asa no voavonjy, avy eo vao manaraka ny fifaliana, izay mitaona ho amin’ny fiderana ao anatin’ny fahamasinana. I Jesoa Kristy dia nifaly noho ny asan’ny Fanahy Masina tao amin’ny mpianatra. Sambatra ireto farany satria nahita ny zava-miafina momba an’Andriamanitra ao amin’ny asan’ny Fanahy Masina, izay tsy naseho ny olona hafa nandritra ny taona maro nefa nampahitana azy ireo. Raha toa isika ka mahatsiaro fangirifiriana amin’ny fanaovana ny asan’ny Tompo, dia mahazo mahatoky isika ny fahitana ny asam-pamonjena tsapain-tanana. Tsy afaka mandray fifaliana anefa isika, raha tsy manana fo feno fanetren-tena toy ny zaza, handraisana ilay fahefana lehibe omeny antsika. Andriamanitra tokana miseho amin’ny “Olona” telo ao amin’ny Trinite: Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Mifandray sy mifameno ireo sady feno Fitiavana antsika olombelona. Isika zanany no atao fitaovana, handray sy hampiasa ny fahefan’ny Fanahy Masina, hanomezam-boninahitra ny asan’Andriamanitra hamonjena ny hafa.
Hatsarao ny fanaovana ny asan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina
Ny asa ataon’ny kristiana no itarafana ny maha kristiana azy, mampiavaka azy: tena miasa marina manahaka an’i Jesoa Kristy, izay marina. Tsy miresaka ihany, fa tena mitia olona tanteraka, manome izay fanampiana amin’ny hetsika rehetra izay tanterahina, mizara fiainana. Ho an’ny Diakona sy Loholona ao anatin’izao alahady natokana ho azy ireo izao, miasà amin’ny fitiavana sy amin’ny marina. Manaova jery todika ny toe-panahintsika enti-miasa: milofo miaraka Aminy marina ve? Raha eny, dia tohizo izany fa ankasitrahan’ny Tompo. Raha tsia kosa, dia izao no fotoana hanavaozana ny fanoloran-tena marina eo anatrehan’Andriamanitra. Mampahery antsika ny Tompo hanatsara ny fanaovana ny asany. Raiso ny lalam-pitiavana hamerina anao amin’ny lala-marina sy hanampy anao.
Manoloana ny ady amin’ny Covid-19 sy ny loza maro mihatra amintsika, dia aoka isika mpino kristiana tsy ho rendrika na ho variana miatrika olana, ka manadino ny hampiorina ny finoantsika. Manàna fahazavan-tsaina sy fahendrena, fahefana, fitiavana, fifaliana satria efa nomena ny Fanahy Masina nandritra ny batisa, ka hampiasa ireo karazana herim-panahy omena antsika, ho fiaingana vaovao indray ho amin’ny fanoloran-tena amin’ny toerana misy antsika sy andraikitra sahanintsika.
Nisy feon-javamaneno fohy. Nalefa ny hiran’ny Taninketsa “MITOETRA SY MIORINA” (RAJAOFETRA John). Narahin’ny vavaka fangataham-pitahiana izany.
Ny mpitarika no nanao izany vavaka izany. Nisaorany ny Teny avy notoriana mba hampiharana izany eo amin’ny fiainana. Nivavaka koa izy ho an’ny reny rehetra hahatanterahany amim-pifaliana sy fahasambarana, ny asa eo anivon’ny tokantranony. Nentina amim-bavaka ny FDL eto amin’ny Fitandremana hiorina tsara amin’ny fanampiana ny Mpitandrina. Notononina koa ny mpianakavin’ny finoana isam-batan’olona mba handaminan’Andriamanitra raha misy ny korontana ; hisian’ny vahaolana ; hahasitrana ny aretina. Nivavaka koa ho an’ny FJKM isan’ambaratonga, mba ho mendrika ny anarana entiny, hiorina amin’ny herin’ny Fanahy Masina. Tsy diso anjara amin’ny hataka ny firenena malagasy sy ireo manana hetaheta. Nisy vavaka mangina. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny fangatahana.
Natao ny hira FFPM 645: 2 « JESOSY KAPITENINAY». Notononina ny tondrozotra 2021 hoe : “ Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara… Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara”. Natolotry ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra ny tsodrano, dia noredonina ny hira « MIALOKA AMINAO », nofaranana tamin’ny “Amena” nohiraina. Nisy vavaka mangina; notonina ny Trinite ary nanaraka ny feon-javamaneno. Naharitra 1 ora sy 5 minitra ny fotoana manontolo.